Yaa ku dhagan doorashada Puntland ee Aqalka Sare? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Yaa ku dhagan doorashada Puntland ee Aqalka Sare?
Yaa ku dhagan doorashada Puntland ee Aqalka Sare?
Doorashada xubnaha Golaha Aqalka Sare ayaa si rasmi ah u bilaabatay, waxaana doorashooyinkii ugu horreeyey ee Golahaasi lagu qabtay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo oo ka kala tirsan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Maamullada harsan waxaa ka mid ah Puntland, haddaba yaa ku dhagan qabashada doorashada Aqalka Sare ee maamulkaasi?.
Warqad kasoo baxday xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland ayaa lagu sheegay in la joogo waqtigii lagu heshiiyey doorashada Golaha Aqalka Sare, waxayna dalab xasaasi ah u direen madaxweyne Siciid Cabdullahi Maxamed (Deni) oo weli ku dhagan doorashadaasi.
Guddiga ayaa ka codsaday Saciid Deni inuu soo saaro liiska xubnaha musharraxiinta ee ku tartamaya kuraasta taalla magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
“Waxaan halkan kuugu soo wadaagayaa codsi ku aadan inaad noo soo gudbiso liiska musharraxiinta Aqalka Sare,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland Cabdikariin Muuse Maxamed.
Sidoo kale waxa uu intaasi raaciyey ” Mudane madaxweyne anigoo ku kalsoon codsigeyga inaad iga aqbali doontid, si aan u gudano waajibaadka na saaran ee qaran,”.
Deni ayaa laga sugayaa inuu ka jawaabo dalabkan, isla-markaana uu ku dhawaaqo liiska xubnaha musharraxiinta ee ku tartamaya doorashada ka dhaceysa magaalada Garoowe.
Si kastaba Puntland ayaa la filayaa inay qaado dhabihii ay mareen maamullada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, isla-markaana ay soo xusho Senatorada ka imaanaya maamulkaasi.